Malezia: Hita Amin’ny Lahatsary Amin’ny Finday Ny Fanararaotam-pahefan’ny Mpitandro Filaminana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Mey 2018 4:02 GMT
Raha nanomboka nanaiky ny tatitra momba ny heloka bevava nalefan'ny olom-pirenena avy amin'ny findainy ny mpitandro filaminana Maleziana, dia tsy nampoiziny fa indray andro any dia ho tratra ao ny hadalan-dry zareo.
Tsy maintsy niaritra ny kolikoly sy ny fitondrantena tsy mendriky ny mpitandro filaminana ny maleziana amin'ny fiainany andavanandro. Saingy amin'izao fotoana izao, dia omen'ny bilaogy sy ny lahatsary anaty finday ho an'ireo maleziana izay misafoaka noho ny tsy fahampian'ny hetsika atao amin'ny mpitandro filaminana, ny làlana vaovao sy tena tian'ny vahoaka. Ezahan’ ny bilaogy maleziana vaovao iray – Polis Raja Di Malaysia (na ” Polisim-Panjakana Maleziana”) – ny manangona ireo lahatsary manadihady ny tsy fahamendrehan'ny mpitandro filaminana avy amin'ny lahatsary nozaraina tamin'ny tranonkala toy ny YouTube sy ny GoogleVideo. ” Tokony hiady amin'ny heloka bevava ny mpitandro filaminana fa tsy hiady amin'ny vahoaka“, io no lohateny lehibe ahindrahindran'ilay bilaogy. Ireo lahatsary avy amin'ny finday ao amin'ny Youtube, ohatra, dia manomboka amin'ny lahatsary sy ny sary namboarina mampiseho ireo mpitandro filaminana manaparitaka hetsi-panoherana ka hatramin'ny mpitandro filaminana iray manao tifi-danitra tsy amin'ny antony rehefa mandrava ady – araka ny asehon'ny sary etsy ambany .
Misy lahatsary vao haingana iray izay tsy mbola nalefa tamin'ny Polis Raja Di Malaysia, saingy efa navoakan'ireo bilaogy hafa, toa mampiseho mpitandro filaminana iray mikapoka sy manivaiva tanora anankiroa ao amin'ny trano mihiboky ny mpitandro filaminana. Niteraka adihevitra tany Malezia izany ary antsoin'ny fikambanana mpiaro ny zon'olombelona Suaram hoe “ny tendron'ny vongan-dranomandry “. Ilay lahatsary, izay mampiseho tanora iray noterena hilelaka ny rorany eo amin'ny tany, dia ohatry ny nalain'ny mpitandro filaminana iray sary tamin'ny findainy, ary tsy fantatra izany raha tsy nalefany namboarina ilay finday. Nampakarin'ny teknisiana iray tao amin'ny aterineto ilay lahatsary, ary olona iray nahita ilay izy no nandefa izany tany amin'ny vaovaon'ny Utama Malaysia TV3, izay nandefa izany tamin'ny herinandro lasa.
Iray ihany amin'ireo tranga maro heverina ho habibian'ny mpitandro filaminana izay tsy nohadihadiana na tsy misy sazy izany, ary ity anankiray ity dia mahatonga adihevitra satria nipoitra ilay porofo amin'ny lahatsary- tamin'ity indray mitoraka ity, dia navoakan'ilay mpitandro filaminana izy tenany tsy sazoka. Vokany, voarara tsy mahazo mitondra finday misy fakan-tsary ny mpitandro filaminana.
Tamin'ny Novambra 2005, nisy adihevitra iray nirongatra manodidina ilay antsoina hoe lahatsary Squatgate, izay ahitana tovovavy noterena hiboridana sy hanao fandehan-tsahona tao anaty trano mihiboky ny mpitandro filaminana. Novoizina tamin'ny MMS (Multimedia Messaging Sevice, na sary sy lahatsary alefa ohatra ny somaiso amin'ny finday) tamin'ny alàlan'ny lohateny hoe “Gadis Lokap” ilay lahatsary 70 segondra – mbola nalaina mpitandro filaminana ihany koa – mandra-pandefa azy tany amin'ilay solombavam-bahoaka mpanohitra, Teresa Kok tamin'ny VCD (lahatsary amin'ny kapila mangirana). Nasehon'i Kok tamin'ireo solombavam-bahoaka mpiara-dia aminy ilay lahatsary tao amin'ny solosaina findainy, ary vetivety foana taorian'izay dia natsangana ny vondrona iray hanadihady ny zava-nitranga. Taty aoriana dia nitoraka bilaogy betsaka momba ireo tsikera voarainy tamin'ny nanehoany ilay tantara ratsy izy, isan'izany ny fiampangana ho nandrisika ny ‘voyeurisme’.
Tany am-piandohana izahay dia nikasa ny hampifandray tamin'ilay dikan-dahatsary nohavaozina, izay nanapaka ilay fiboridanana eto anoloana tamin'ilay dikan-dahatsary voalohany, saingy nanapa-kevitra ny tsy hampifandrohy mihitsy, satria namoaka fanambarana mitaky ny olona hampiato ny fanaparitahana ilay lahatsary i Hemy Hamisa Abu Hassan Saari, ilay niharam-boina tamin'ny trangan'i SquatGate.
Mety hiteraka olana be ny lahatsary amin'ny finday – matetika ratsy kalitao, tsy mazava tsara, mihetsiketsika ary indraindray sarotra henoina. Vao mainka saropady ny mampiasa izany ho porofo. Niteraka fifanolanana ilay rakitsary voalohany tao amin'ny SquatGate satria – araka ny nasongadin'ny bilaogy Politics 101 Malaysia- natambatry ny haino aman-jery sasany tsiroaroa mba hahazoana 8, tamin'ny fampifangaroana ireo vehivavy tao amin'ny rakitsary amin'ny tranga hafa izay ahitàna teratany shinoa telo noterena hiboridana tao amin'ny biraon'ny mpitandro filaminana tany Kuala Lampur tamin'ny novambra 2005. Niseho tamin'ny fotoana nandefasan'ny Praiministra maleziana ny minisitry ny atitany ho any Beijin mba hanao fialantsiny ôfisialy amin'i Shina ilay rakitsary Squatgate. Taty aoriana, rehefa fantatra fa vehivavy maleziana, malaysiakini, ilay nasehon'ny lahatsary Squatgate, dia nanolo-kevitra ny tranonkalan'ny haino aman-jerin'ny olom-pirenena fa vokatry ny hadisoan'ny haino aman-jery dia mety hisy ny valinkafatra hanohintohina ny fahalalahan'ny asa fanaovana gazety.
Ankehitriny, tamin'ny herinandro nivoahan'ilay lahatsarin'ny habibian'ny mpitandro filaminana ihany, dia nametraka fangatahana onitra, 250.000 RM avy amin'ny governemanta maleziana i Hemy Hamisa Abu Hassan.
Nitsikera matetika ny Polisim-panjakàna Maleziana ireo vondrona mpiaro zon'olombelona noho ny fampijaliana sy fanararaotam-pahefana atao amin'ireo gadra, ary tamin'ny 2003 ny Amnesty International dia niantso hetsika fitandroana filaminana mifototra amin'ny zon'ombelona. Ny horonantsary fanadihadiana “Know Your Rights” (“fantaro ny zonao”), izay manome ho an'ireo maleziana tsotra ireo lisitra fanamarinana ny amin'izay fitondràntenan'ireo mpitandro filaminana azo ekena sy ny amin'ny zon-dry zareo voasambotra no fitrohana be mpanao indrindra hatreto, ao amin'ny haba-tranonkala Malaysian Bar Council.
Ho setrin'ilay fanerena, telo taona lasa izay, dia nampanantena ny hametraka vondrona antsoina hoe IPCMC- Vaomiera tsy miankina momba ny fitarainana sy ny tsy fahamendrehan'ny fitondratenan'ireo mpitandro filaminana- ny Praiministra maleziana, ary telo taona aty aoriana mbola tsy voapetraka sy tsy miasa foana izany. Novoizin'ny malaysiakini ny fanambarana nataon'ny mpitandro filaminana tamin'ny 2006 mampiseho ny fanoheran'ny mpitandro filaminana ny fananganana ilay sampandraharaha. Nambaran‘ny Aliran, fikambanana iray mpiaro ny zon'olombelona maleziana, fa tamin'ny fiandohan'ity taona ity dia tsy noraharahain'ny haino aman-jery mahazatra ny fangatahany hametraka ny IPCMC, ary novalian'ny Suaram sy ny Amnesty International Maleziana tamin'ny fitakiana ny hametrahana avy hatrany ny IPCMC ny zava-niseho farany. Na teo aza anefa izany, dia toa mbola mitohy ny fanitsakitsahana.
Androany dia voalaza fa, amin'ny Alatsinainy 11, ho soloana an'i Tan Sri Musa Hassan, ilay nahazo maripahaizana momba ny lalàna tany Angletera i Tan Sri Mohd Bakri Omar. Miaraka amin'ny resabe fa hoe apetraka tsy ho ela ilay sampandraharaha, dia ahoana no havalin'i Musa Hassan ilay lahatsary manafintohina farany, ary ahoana no hitantanan'ny governemanta ny onitra nangatahan'i Hemy Hamisa Abu Hassan Saari izay lasa zava-dehibe. Namoaka fanangonan-tsonia an-tserasera ny MP Teresa Kok, afaka manao sonia izany ny mpisera amin'ny aterineto mba hanerena ny governemanta hametraka ny IPCMC. Mandra-pahatongan'izany, na izany aza, ny andraikitry ny olom-pirenena tsotra sy ireo mpanome vaovao ny mpitandro filaminana tamin'ny firaketana sy fampisehoana ny fitondrantena tsy mendriky ny mpitandro filaminana amin'ny fampiasàna finday sy ny bilaogy no toy ny làlan-tokana hisian'ny rariny.